UMassimo Dutti wethula indlu entsha yokushicilela i-SS21: New Edgy | Bezzia
UMaria vazquez | 09/06/2021 18:00 | Ngigqokani
UMassimo Dutti muva nje wethule okusha ukuhlela entwasahlobo-ehlobo 2021. Umhleli ongaphansi kwesihloko esithi New Edgy usinikeza iziphakamiso zosuku nosuku futhi owabelana nazo ezinye zihlelwe yinkampani phambilini ukuzibophezela kwephalethi lemvelo, yize kunama-nuances ahlabayo.
Uma ubheka okokuqala i-New Edgy, into yokuqala eheha iso lakho ukugqama okutholwa yizingubo ezithile ezifana nezikhindi zelineni, ukubopha izikipa zokuphrinta udayi nezikibha ezine-ribbed. Izingubo ezenzelwe jabulela ihlobo ngokunethezeka.
1 Iphalethi lombala
2 Thayi ama-Dye motifs
3 Okubalulekile kukaMassimo Dutti
Ujwayele ukuhlelwa kokugcina okugcinwa kakhulu uma kukhulunywa ngombala, i- iphalethi yombala ebanzi kangaka lapho inkampani ibhejele lokhu. Iphalethi yombala ekhanyayo lapho amathoni angathathi hlangothi ahlanganiswa namanye anempilo njengamawolintshi, ama-pinks nemifino.
Thayi ama-Dye motifs
Endlini yokushicilela lapho izingubo eziningi zisobala, ama-tie dye motifs awaqapheleki. Sithanda kakhulu ihembe nesiketi esethwe ngamathoni amhlophe, ansundu naluhlaza okwesibhakabhaka enziwe ngendwangu kakotini nosilika. Kepha ikakhulukazi ihembe ngamathoni ewolintshi napinki, enziwe ngendwangu ye-ramie engu-100%.
Okubalulekile kukaMassimo Dutti
I-Las amabhande amafushane welineni ebermuda ziba yingubo ebalulekile kaMassimo Dutti kule sizini. Ngemibala engathathi hlangothi iyahlukahluka kakhulu, kepha-ke, asikwazi ukususa amehlo ethu kumodeli etholakala ngokuluhlaza nangokububende kulo mhleli. Futhi siyawuthanda umqondo wokuwuhlanganisa nehembe nejakhethi enamabele amabili.
AmaKnitwear kungenye ukhiye weqoqo, ikakhulukazi iziketi ezinezimpiko futhi iziqongo zethangi elibambo. Ngokuhambisana nalokhu futhi kuveza okweqile kwezingubo noma okokwembatha kwehembe okusebenza njengengubo nokuthi ngemibala efana ne-beige noma i-khaki ihlangana nakho konke.
Uyazithanda iziphakamiso ezintsha ezivela enkampanini yeqembu le-Inditex?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » UMassimo Dutti wethula indlu entsha yokushicilela i-SS21: New Edgy